Ailika na-ewebata ngwa ngwa nke Okike Ike Igwe
1. Ike nke anyanwụ maka ndị ọrụ: a na-eji obere ikike sitere na 10-100w mee ihe maka iji ike kwa ụbọchị na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na-enweghị ike, dị ka plateaus, agwaetiti, ebe ndị a na-azụ atụrụ, mpaghara ókèala na ndị agha ndị ọzọ na ndụ ndị nkịtị, dị ka ọkụ , TV, ihe ndekọ redio, wdg; 3-5kw ezinụlọ ụlọ okporo-ngalaba ...
Anyị Ga-akọwapụta Uru Pụrụ Iche nke Mgbapụta Ike fotovoltaic
1. Ike anyanwụ bụ ike na-adịghị agwụ agwụ, na ọgbọ nke ike fotovoltaic nke nchekwa dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi na nsogbu ike na ihe na-adịghị agbanwe agbanwe na ahịa mmanụ ọkụ agaghị emetụta ya; 2, anyanwụ na-enwu na ụwa, ike anyanwụ dị n'ebe niile, ike fotovoltaic ike gene ...
Alikai na-ewebata ihe ndi aga-ele anya n’oru ha site na imewe usoro ikike ikuku nke igwe
1. Tụlee ihe eji arụ ọrụ ụlọ nke ike igwe na igwe na radieshon mpaghara, wdg; 2. Ike zuru oke nke usoro ikike ezinụlọ na-arụ na oge ọrụ nke ibu kwa ụbọchị; 3. Tụlee volta ọkụ nke sistemụ ma hụ ma ọ dị mma maka ...
Nchịkọta Ihe eji edozi foto nke anyanwụ
Dabere na ihe eji emepụta mkpụrụ ndụ nke foto foto foto, ha nwere ike kewaa n'ime mkpụrụ ndụ semiconductor nke dabeere na silicon, mkpụrụ ndụ ihe nkiri CdTe, mkpụrụ ndụ ihe nkiri CIGS, mkpụrụ ndụ ihe nkiri dị mkpa, ihe ndị na-eme ihe nkiri, na ihe ndị ọzọ. N'ime ha, mkpụrụ ndụ semiconductor dabeere na silicon na-ekewa na ...
Nhazi usoro ntinye nke foto
Dịka usoro ntinye nke mkpụrụ ndụ foto fotovoltaic, enwere ike kewaa ya na ntinye ntinye na-enweghị njikọ (BAPV) na Integrated nwunye sistemụ (BIPV). BAPV na-ezo aka na mbara igwe fotovoltaic nke metụtara ụlọ ahụ, nke a na-akpọkwa "nwụnye" sola ...
Nhazi usoro usoro nke foto
A na-ekewa sistemu fotovoltaic na sistemụ ọkụ ọkụ na-apụ apụ, sistemụ ngbako foto jikọtara ọnụ ma kesaa sistemụ fotovoltaic: 1. Gbanyụọ grid fotovoltaic. Ọ na-tumadi ekewet nke anyanwụ cell modul, controll ...
Isi nke Modul fotovoltaic
Enweghi ike iji otu sel nke anwuru ọkụ mee ihe dị ka isi iyi nke ike. Onyinye ike agha gha agha ibu otutu eriri batrị, njikọ yiri ya ma tinye ya na ihe nile. Igwe fotovoltaic (nke a makwaara dị ka oghere anyanwụ) bụ isi nke sistemụ ike ike anyanwụ, bụkwa ihe a na-ebubata ...
Uru na ọghọm nke sistemu fotovoltaic anyanwụ
Uru na ọghọm nke uru nke fotovoltaic system uru Ike anyanwụ enweghị ike ịgwụ. Ike radiant natara site nelu uwa puru iru oru ike uwa otutu oge iri. Enwere ike itinye sistemu fotovoltaic na mbara igwe naanị na 4% nke ọzara ụwa, ge ...
Onyinyo nke useslọ, Akwụkwọ ma ọ bụ Ọbụ Guano na Modul Photovoltaic Ga-emetụta Sistemụ Ọgbọ Ike?
A ga-ahụta sel fotovoltaic ahụ egbochiri ka ikike ibu, na ike nke mkpụrụ ndụ ndị ọzọ na - egbochighị ga - eweta ọkụ, nke dị mfe ịmepụta mmetụta ntụpọ ọkụ. Ya mere, ike nke ike nke usoro fotovoltaic nwere ike belata, ma ọ bụ ọbụna modul fotovoltaic nwere ike gbaa ọkụ.
Ngụkọta oge ikike nke modul fotovoltaic
Soul fotovoltaic modul mejupụtara nke anyanwụ panel, na-akwụ ụgwọ onye nchịkwa, onye ntụgharị na batrị; Usoro ike Solar dc anaghị agụnye inverters. Iji mee ka usoro okike ike anyanwụ nwere ike inye ike zuru ezu maka ibu ahụ, ọ dị mkpa ịhọrọ akụkụ ọ bụla n'ụzọ ezi uche dị na ya ...
Ebe ntinye nke Anyanwu Photovoltaic Bracket
Ntinye nke oghere pv nke anyanwụ: ụlọ ụlọ ma ọ bụ mgbidi na ala, ntụziaka ntinye: kwesịrị ekwesị maka ndịda (usoro ntinye usoro), nwụnye Angle: hà ma ọ bụ dị nso iji wụnye mpaghara latitude, ihe dị mkpa: ibu, ibu snow, seismic chọrọ, ndokwa na spacing ...
Nkewa nke Akụrụngwa Maka volmepụta fotovoltaic
Maka imepụta fotovoltaic maka imepụta ihe eji eme ihe, nke a na-ejikarị ya na ngwa ngwa fotovoltaic, njirimara nke ihe dị mkpa karị, mgbe mgbe enwere ike itinye ya n'ọhịa, mana ọ dịkwa mkpa ịwụnye n'ọnọdụ dị mma karịa, akụrụngwa akụrụngwa abụghị naanị nwere nnukwu stabili ...